သငျသညျ CARDIFF အတွက်အကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးမိနစ်ဟယ်လိုမတ်မတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ - သတင်း
သငျသညျ Cardiff အတွက်အကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးမိနစ်ဟယ်လိုမတ်မတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ
လူမှုရေးမီဒီယာများမှသင့်ကိုအမြဲတမ်းသတိမရမိပါကဟယ်လိုဝိန်းသည်ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်သည်။ ဒီတနင်္ဂနွေဟာမင်းကိုမြို့ထဲကိုအလျင်စလို ၀ တ်ဆင်ဖို့နောက်ဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာ။ ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဟာပစ္စည်းတွေကိုကောက်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုစိစစ်ပြီးစိန့်ဒေးဗစ်စင်တာကိုလှည့်လည်ရှာဖွေတာမရှိဘူး။
ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးဝယ်ခရီးမှာသူရဲကောင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်မှုများနှင့်ကြီးမြတ် bargains နှင့်အတူ။
အလေးအနက်ထားပြောရရင်သင်ဟာကြောက်စရာသူနာပြုတစ်ယောက်ရဲ့အဝတ်အစားကိုပေါင် ၆ ပေါင်၊ ပေါင် ၁ ပေါင်ပေးမယ်၊ ငါတို့သင်္ချာတွေမှန်ရင်အခုဟယ်လိုဝင်းဝတ်စုံအတွက်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ဒါ့အပြင်သူတို့အရွယ်အစားရှိသည်။ BS တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဒီအရွယ်အစားပိုမလိုအပ်ပါ။
Primark ၏ဟယ်လိုဝိန်းရွေးချယ်မှုသည်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်စျေးပေါသည့်အပေးအယူအတွက်မြို့တော်သို့သင်ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအနည်းငယ်ဖြင့်သင်သည်ကောင်းမွန်သောအဝတ်အစားကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်သည် (ကြောက်စရာကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ) ။
Harley Quinn မည်သူမဆို? ဒီတီရှပ်နဲ့ယာယီတက်တူးတွေကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီးဆံပင်ကိုဝက်အမြီးနဲ့ထိုးပြီးမင်းသွားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
Ariana Grande သည်အလွန်ကြီးမားသောဆွယ်တာအင်္ကျီ၊ မြင်းဆံရှည်နှင့်ဒေါက်မြင့်ဘွတ်ဖိနပ်တို့ဖြင့်စုံလင်စေသည်။
2020ဒင်နှင့် erin နေဆဲ 2020
အကယ်၍ မင်းဟာချစ်စရာကောင်းပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ၊ တကယ်တော့ ကြောက်စရာ
အိုကေ၊ ပေါင် ၁ ပေါင်စီအတွက်အလွန်ကောင်းသော Peaky Blinder ဝတ်စုံကိုသင်အလွယ်တကူနေရာချနိုင်သည်။
အကြီးဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ၊ က ကြောင်း Ringleader မတ်မတ်နှင့်၎င်း၏သာ£ 19,99 သည်။ အနည်းငယ်စျေးကြီးသောဘက်၌, ဒါပေမယ့်သူကအနာဂတျမှာမလွှဲမရှောင်လူမှုရေးသို့မဟုတ်ဖန်စီစားဆင်ယင်ပါတီအဘို့သိုထားနိုင်ပါတယ်!
၎င်းသည်သင်၏ကြောက်စရာနံ့သာ / ကျားသစ်လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက်ကျားသစ် jumpsuit ဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ်ဦးက tinder အပေါ်လျှင်ကြည့်ဖို့ရှိနေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်
ဘေးဖယ်လှည့်စား, New Look က၎င်း၏ဟယ်လိုဆက်စပ်ပစ္စည်းအကွာအဝေးနှင့်အတူအမှန်တကယ်အတော်လေးအထင်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ရင့်ကျက်ပြီးတောက်ပနေသည့်ဤအရာသည်မည်သည့်ကျောင်းသားကမဆို DIY ၏အဝတ်အစားကိုလိုချင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျောင်းသားလျှော့စျေး!
Pop-up ဟယ်လိုဝိန်းဆိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဝတ်စုံအများစုဟာဈေးကြီးတဲ့ဘက်မှာရှိတာကိုငါတို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည့်အဆင်သင့်ဝတ်စုံများဖြစ်သည့်အတွက်သူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်ကျတဲ့ ၀ တ်စုံအတွက်ရယ်စရာကောင်းတဲ့နာမည်အချို့ကိုရှာကြည့်ပါ - Peaky blinders 'gangster costume' နှင့် Stranger Things မှ Eleven - 'Telepathic မိန်းကလေး' အဖြစ်ကြည့်ပါ။
၎င်းသည်လွဲချော်ရန်ခဲယဉ်းသော်လည်းသင်လုပ်လျှင် St. David's စင်တာရှိ Hollister ၏ဘေးတွင်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးတော့ Poundland သည်ဟယ်လိုဝိန်းပစ္စည်းများကိုအများဆုံးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအချို့သောအရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
သငျသညျပတ်ပတ်လည်တစ် ဦး မတ်မတ်တည်ဆောက်ရန် quid များအတွက်တစ်ခုခုရနိုင်လျှင်ကြည့်ရှုရန် Poundland မှခရီးစဉ်ကျိန်းသေအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ချစ်ပ်များကဲ့သို့စံ DIY နှင့်စျေးပေါသည်။ ညှိနှိုင်း။
တစ် ဦး ထိုးနှက်အလုပ်အကိုင်အပိုကောင်းအောင်ဘယ်လို
တစ်ယောက်ယောက်က YOLO x သို့“ Light Light head bopper” ကိုဝတ်ဆင်ပါ
ဒီတော့ဒီမှာရှိတယ်။ Cardiff တွင်ယခုနှစ်တွင်အလွန်လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသော Halloween ဝတ်စုံများကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ။ ဤဝတ်စုံများကိုဟယ်လိုဝိန်းပွဲပြီးနောက်အပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကလပ်အသင်းများတွင်တွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်နေပါသည်။